के मेरो कुकुरको लागि एयर फिल्टर मास्कले यसलाई कोरोनाभाइरसबाट बचाउनेछ? - गुड एयर टीम द्वारा K9 मास्क
COVID-१ Pand महामारीको समयमा तपाईंको कुकुरलाई जोगाउँदै
अमेरिकी पशु चिकित्सा मेडिकल एसोसिएसन नोट गर्दछ कि घरपालुवा जनावरहरू COVID-१ by द्वारा सजिलैसँग संक्रमित भएको देखिँदैन Testing 65 संयुक्त राज्यमा रोगका लागि सकारात्मक परीक्षण। यी स्ख्यामा अप्रिलमा न्यु योर्कको चिडियाखानामा चार बाघ र तीन सिंह, thirty१ जना पाल्तु बिरालाहरू, र तेईस घरपालुवा कुकुरहरु.
उत्तरी क्यारोलिना पग, टेक्सासको योर्की, र न्यु योर्कको जर्मन शेफर्ड जस्ता घरपालुवा जनावरहरूमा यी तितरबित COVID-19 केसहरूले थुप्रै कुकुर र बिराला मालिकहरूलाई रोकिरहेका छन्। को CDC ले भर्खरै पाल्तु जनावर मालिकहरूको लागि यसको मार्गदर्शन अपडेट गर्‍यो यी केसहरूको प्रकाशमा - यद्यपि यसले अझै घरपालुवा जनावरहरूको लागि नियमित परीक्षणको सिफारिस गर्दैन।
“हामी मान्छेहरू आत्तिन चाहँदैनौं। हामी मानिसहरूलाई घरपालुवा जनावरहरूदेखि डराएको वा उनीहरूको परीक्षणको लागि हडबडी गर्न चाहँदैनौं जस्तो सीडीसीका अधिकारी डा। केसी बार्टन बेहरावेशले एपीलाई बताएका छन्। "त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि घरपालुवा जनावरहरूले यो रोग मानिसमा फैलाउन भूमिका खेल्छन्।"
अझै, बिरामी घरपालुवा जनावरहरूले (जुन पूर्ण रूपले स्वस्थ हुने आशा गरिन्छ) भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूले आफ्ना चार खुट्टे साथीहरूमा रोग सार्न सक्छन् वा उनीहरूले पनि भाइरसलाई पछिबाट उनलाई पक्रन सक्छन् कि भन्ने डरमा शान्त पार्दछन्।
के तपाइँ आफ्नो पाल्तु जनावर, वा अरू कसैको घरपालुवाबाट COVID-19 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
यसमा CDC बताउँछ कोरोनाभाइरस र जनावरहरू त्यो खण्ड, "यस समय, पाल्तु जनावर लगायत साथी जनावरहरूले COVID-१ people मानिसहरूलाई सार्न सक्छन् वा तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा संक्रमणको स्रोत हुन सक्छन् भन्ने कुनै प्रमाण छैन।" अझ के, विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक नेतृत्व डा। मारिया भान केरखोभले भने भर्खरको प्रेस ब्रीफिंगमा "हामी विश्वास गर्दैनौं कि [घरपालुवा जनावरहरूले] प्रसारणमा भूमिका खेल्छन्।"
तर मानिसहरु लाई आफ्नो घरपालुवा जनावरहरुमा भाइरस फैलाउने बारे के?
जबकि सीडीसीले नोट गरे कि यो "बिरालाहरू लगायतका थोरै घरपालुवा जनावरहरूका बारे सचेत छ, जसलाई भाइरस स to्क्रमित हुने भनिएको छ COVID-१ causes, प्रायः COVID-१ with भएका व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्क पछि, प्रसारणको सम्भावना अझै देखा पर्दछ। असम्भव
तर त्यहाँ अझै धेरै कुरा छन् जुन हामीलाई अहिले पनि यो नयाँ भाइरसको बारेमा थाहा छैन, र त्यहाँ ह Kongक inका दुई कुकुर, बेल्जियमको एउटा बिरालो र ब्रोंक्स चिडियाखाना सिंह र बाघहरू सहित मुठीभर पृथक बिरामी जनावरहरू भएको छ। त्यसकारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले सक्रिय रूपमा कोभिड १ of लाई जनावरहरूमा मानव प्रसारणको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। केरखोभले स्वीकार गरे, "हामी लाग्छौं कि [जनावरहरू] संक्रमित व्यक्तिबाट संक्रमित हुन सक्छ।"
र को रूप मा धेरै छलफल गरिएको ह Hongक Kong मा दुई कुकुर को मामलाहरु, होवेले बताए कि यी जनावरहरूले भाइरसको उपस्थिति देखाए, तर अन्यथा कुनै क्लिनिकल लक्षणहरू थिएनन् र बिरामी थिएनन्। तिनीहरूले पछि नकरात्मक पनि परिक्षण गरे। यसबाहेक, यी केसहरूमा प्रयोग गरिएको परीक्षणले भाइरसको एउटा कणको अस्तित्व पत्ता लगाउन सक्छ। "पेटको सामग्री वा मलमा भाइरसको टुक्राहरू पत्ता लगाउनुको मतलब [कुकुरहरू] संक्रमित भएको होइन," उनले भने।
पहिलो टेक्सासको कुकुरले कोरोनाभाइरसको साथ सकारात्मक परीक्षण गर्यो जुलाईमा संक्रमण। कुकुर,a२ वर्ष पुरानो एक पुरुष योर्की, टेरान्ट काउन्टीमा टेक्सासको पहिलो जनावर भाइरसको लागि सकारात्मक परिक्षण गर्ने हो जसले मानवहरूमा COVID-19 निम्त्याउँछ। टेक्सास एनिमल हेल्थ कमिशनका अनुसार अमेरिकी कृषि विभागको पशु चिकित्सा प्रयोगशालाले यो टेस्ट प्राप्त गर्‍यो र अर्को दिन कुकुरलाई स infected्क्रमित भएको पुष्टि गरियो।
२०२१ कुकुरहरुमा कोभिड संक्रमण को बारे मा अनुसन्धान
कुकुर वा बिरालाहरु जो कोभिड भएका मानिसहरु संग एक घरमा बस्छन् प्रायः संक्रमित र आफैं बिरामी हुन्छन्। विज्ञहरु संक्रमित व्यक्तिहरुलाई सम्भव भएमा उनीहरुका जनावरहरु बाट टाढा रहन सल्लाह दिन्छन्।
नयाँ अनुसन्धानले देखाउँछ कि उपन्यास कोरोनाभाइरस, वा SARS-CoV-2 बाट संक्रमित हुने, र बिरामी परेका मानिसहरु लाई अक्सर आफ्नो घरपालुवा जनावर मा रोगजनक पास। जनावरहरु कहिलेकाहिँ संक्रमण बाट बिरामी पर्छन्, कहिले काहिँ गम्भीर रूपमा, यस बर्ष मा प्रस्तुत दुई अलग अध्ययन को नतीजा अनुसार क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र संक्रामक रोगहरु को यूरोपीयन कांग्रेस। कागजहरु अझै सम्म वैज्ञानिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको छैन।
पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा एक टोली डोरोथी बिएन्जल ओन्टारियो मा Guelph विश्वविद्यालय को १ 198 c बिरालाहरु र ५४ कुकुरहरु मा सम्भावित COVID संक्रमण को जांच। सबै कुकुरहरु र बिरालाहरु को 54 एक घर बाट आएका थिए जसमा कम्तीमा एक व्यक्ति कोभिड थियो, र बाँकी बिरालाहरु एक पशु आश्रय वा न्यूटर क्लिनिक बाट आएका थिए।
टोलीले पत्ता लगायो कि तीन बिरालाहरु मध्ये दुई र पाँच कुकुरहरु मध्ये दुई जसको मालिक कोविड को सार्स-कोभ -२ को बिरुद्ध एन्टिबडीहरु थिए, उनीहरु कुनै समय भाइरस बाट संक्रमित भएको संकेत गर्दछ। तर आश्रय समूह मा, १० बिरालाहरु मध्ये एक भन्दा कम मा यी एन्टिबडीहरु थिए। र neuter क्लिनिक मा, आंकडा2मा एक भन्दा कम थियो।
कुकुर र बिरालाहरु जुन घरहरु बाट आएका थिए जसमा मालिकहरु को कोविड को पनि अक्सर रोग को लक्षणहरु विकसित भएको थियो, Bienzle र उनको टीम रिपोर्ट। २० देखि ३० प्रतिशत जनावरहरुको बिचमा उर्जा र भोक, खोकी, पखाला, नाक बग्ने र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको छ।
जटिलताहरु ज्यादातर हल्का र छोटो अवधिको थिए, तर ती तीन मामलाहरुमा गम्भीर थिए। बिरालाहरु मा, संक्रमण को जोखिम उनीहरु मा नजिक बाट cuddled थिए जो मा अधिक थियो, व्यवहार सर्वेक्षण अनुसार एन्टिबडी परीक्षण को अलावा शोधकर्ताहरु द्वारा आयोजित। यो cuddling सम्बन्ध कुकुरहरुमा देखिएको थिएन।
त्यसोभए उनीहरूले COVID-19 सम्झौता गरेमा घरपालुवा जनावरले के गर्नु पर्छ?
स्वास्थ्य विज्ञहरू सहमत छन् कि तपाइँले यसलाई सुरक्षित प्ले गर्नुपर्दछ र तपाइँको घरपालुवा जनावरसँग कम्तिमा वा कुनै सम्पर्क हुनुहुन्न, विशेष गरी किनभने यस नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा अझै धेरै अज्ञात छन्। यसको मतलव कुनै दुलही, पेटिंग, चुम्बन वा तपाईंको फर बच्चा संग खाना साझा, दुर्भाग्यवश छैन। तिनीहरूले पनि तपाईंलाई चाट्नु हुँदैन। घरपालुवा जनावरहरुलाई कोठाबाट बाहिर राख्नुहोस्, सम्भव भएमा, र एक परिवारको सदस्यलाई तपाइँको समालोचकको हेरचाह गर्नुहोस्, खानपान, नुहाउने र हिड्ने जस्ता। हेर्नुहोस् यदि तपाईंको साथी वा छिमेकी छ जो तपाईंको घरपालुवा जनावर घरबाट निकाल्न सक्दछ।
यदि तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ र बिरामी हुँदा आफैले आफ्नो पाल्तु जनावरको हेरचाह गर्नुपर्छ भने, सकेसम्म सम्पर्कलाई सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनुहारको मास्क लगाउनुहोस् वा अनुहार कभरि you're्ग गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो पशुको वरिपरि हुनुहुन्छ, र आफ्ना हातहरू धुनुहोस् पहिले र पछि तपाईं तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ।
के तपाईंको घरपालुवा जनावरले मास्क लगाउनु पर्छ वा सुरक्षाका लागि बुटीहरू लगाउनु पर्छ?
CDC ले हाल पाल्तु जनावरहरुलाई सुरक्षा फुटवेयर वा अनुहार मास्क लगाउन सिफारिस गरिरहेको छैन। प्रायः घरपालुवा जनावरहरू भाइरसको लागि जाँच्ने सम्बन्धी प्रायः केसहरू ती ज्ञात पाल्तु जनावर मालिकहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा थिए जो COVID-19 बाट सकारात्मक छन्।
तर, यदि तपाई सतर्क हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईको कुकुरका लागि समाधानहरू छन्। K95 मास्कामा प्रयोग गरिएको चरम सास फेर्ने N9 प्रतिस्थापन एयर फिल्टरहरू कोविड -१ with का बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका अस्पतालमा नर्स र डाक्टरहरूले लगाएको फेस मास्क जस्तो समान मानकका साथ सिर्जना गरिन्छ। कोरोनाभाइरससँग नजिकको र निरन्तर सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको रक्षा गर्न एन 19 air एयर फिल्टरहरू सबैभन्दा प्रभावकारी सामग्री हुन्। उनीहरु CDC द्वारा सिफारिस गरिएको यी वातावरण को लागी।
तर, के N95 एयर फिल्टरहरू कोर्नोभाइरसबाट एक व्यक्ति वा घरपालुवा जनावरको सुरक्षामा १००% प्रभावकारी छन्? होइन। तिनीहरू डाक्टरहरू, नर्सहरू, वा कुकुरहरूको लागि १००% प्रभावकारी छैनन्। त्यसोभए, कुकुरले K100 मास्काको राम्रोसँग प्रयोग गर्दै कुकुरो भाइरसबाट कुकुरलाई बचाउनमा अत्यन्त प्रभावकारी छ तर ग्यारेन्टी छैन। साथै तपाईको कुकुरलाई मात्र यो मास्क लगाउन सिफारिस गरिएको छ छोटो अवधिका लागि र दृश्यात्मक निगरानीको साथ कुकुरलाई सम्भावित घाउ वा अचाक्ली गर्मीबाट जोगाउन। थप विवरणहरू र पूर्ण पढ्नुहोस् तपाईंको कुकुरले K9 मास्क लगाएको बारेमा चेतावनीहरूको सूची.
के तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावरहरू COVID-19 का लागि जाँच गर्नु पर्छ?
होईन, CDC ले यस समयमा पाल्तु जनावरहरूको लागि परीक्षण सिफारिस गरिरहेको छैन।
के तपाईलाई लाग्छ कि तपाइँको घरपालुवा जनावर कोरोनाभाइरस संग बिरामी छ?
CDC ले भन्छ कि यदि तपाईंको पाल्तु जनावरहरू COVID-19 भएको व्यक्तिसँग सम्पर्क पछि बिरामी पर्छन् भने, पशुलाई आफैं पशु चिकित्सा क्लिनिकमा न लैजानुहोस्। आफ्नो पशु चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस् र वर्णन गर्नुहोस् कि तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूले खोक्रा, छींकने र नखाने जस्ता लक्षणहरू देखाइदैछ COVID-19 को साथ एक व्यक्ति वरिपरि हुँदा। केही पशु चिकित्सकहरूले टेलिमेडिसिन परामर्श वा बिरामी घरपालुवा जनावरहरू हेर्नको लागि अन्य योजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। तपाईंको पशुचिकित्सकले तपाईंको कुकुर वा बिरालाको मूल्याate्कन गर्न सक्छ, र त्यहाँबाट तपाईंको घरपालुवा जनावरको उपचार र हेरचाहको लागि अर्को चरणहरू निर्धारित गर्दछ। फेरि, घरपालुवा जनावरहरू मात्र “धेरै दुर्लभ परिस्थितिहरूमा” र केस-केस-केस आधारमा मात्र परिक्षण गरिन्छ। शुभ समाचार यो हो कि अमेरिकाका सबै जनावरहरूले अहिले सम्म सकारात्मक परीक्षण गरेका स्वस्थ हुने आशा गरिन्छ।
यदि तपाईं कुकुर हिंड्नुभयो वा COVID-19 बाट बिरामी परेको घरपालुवा जनावर पाल्नुभयो भने तपाईंले के सावधानी अपनाउनु पर्छ?
जबकि भाइरस काउन्टरटप्स र ढोका घुम्ने जस्ता चिकना सतहहरू लिन को लागी सजीलो छ, कुकुर र बिरालो फर अधिक झरझो छ र भाइरस जालमा। यसले जानवरको कोटबाट उठाउन गाह्रो बनाउँछ। पशुलाई तपाईको घरमा आउँदा नुहाउनेमा निश्चित रूपमा कुनै समस्या हुँदैन। कुकुरहरुका लागि सबै प्रकारका महान कीटाणुनाशक शैम्पूहरू छन्। र आधारभूत सरसफाइ, जस्तै तपाईले आफ्नो घरपालुवा जनावर ह्यान्डल गर्नु भन्दा पहिले र आफ्नो हात धुनु - र माफ जनावर प्रेमीहरू, तर आफ्नो पालतु पशुलाई मुखमा चुम्बन दिनुहुन्न - कुनै जनावरबाट कुनै किसिमको कीटाणु टिप्न रोक्नको लागि महत्वपूर्ण छ, COVID- 19
कुकुरको मुख सफा र बाँझो छैन जस्तो कि कोही मानिसहरूले सोच्दछन्। जब तपाईं यी सबै चीजहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ जब कुकुरले चाट्छ ... यो एक राम्रो विचार मात्र होईन।
तपाईं बिरामी साथीको घरपालुवा जनावर पालना गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईंले यसलाई आफ्नै घरपालुवा जनावरबाट अलग्गै राख्न सक्नुहुन्छ? के घरपालुवा जनावरले अन्य पालतु जानवरहरुलाई फैलाउन सक्छ?
यस बिन्दुमा हामी विश्वास गर्दैनौं कि तपाईले एक-अर्काबाट घरपालुवा जनावरहरुलाई अलग गर्नु पर्छ। को विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अध्ययन सुझाव दिन्छ बिरालाहरूले यसलाई एक अर्काबाट समात्छन्, तर प्रयोगमा कुनै पनि flines रोगी भए वा कुनै लक्षण देखा परेन। तीनवटा घरेलु बिरालाहरू भाइरसको साथ खोपिएका थिए र ती दुबैलाई एउटा अनौंफ्याक्ड बिरालाले खोरमा राखियो। जबकि केज जोडीहरूले भाइरस स contract्क्रमित गरे, कुनै पनि बिरालाहरू बिरामी भएनन्, र सबै छ दिन भित्र भाइरस मुक्त थिए। तर अझै अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, पाल्तु कुकुरहरू सहित।
निस्सन्देह, यदि जनावरहरूले एक अर्कोलाई चिन्दैनन्, वा एक अर्कोसँग मिल्दैन भने, तपाइँ तिनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै परिचय दिन चाहानुहुन्छ। यसले सामाजिकरण प्रविधिहरू समावेश गर्दछ जस्तै पर्यवेक्षित परिचयहरू, क्रेटिंग, र यो निश्चित गर्न कि तपाईं एक जनावरलाई अर्को जनावरको प्रशंसा वा खोज्दै हुनुहुन्न। मानवीय समाजले यी प्रस्ताव गर्दछ परिचयका लागि सुझावहरू नयाँ कुकुरहरु र नयाँ बिरालाहरू बहु-घरपालुवा घरहरूमा।
एफडीए पनि आफ्नो नयाँ भिडियो मा नोट गर्‍यो त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धानले भन्छ कि कुकुरहरू भन्दा बिरालाहरू र फेरेटहरू भाइरस हुने बढी सम्भावना हुन्छ।
घरपालुवा जनावरहरूसँग उचित सामाजिक दूरी शिष्टाचार के हो?
अन्य व्यक्तिहरूबाट छ फिट टाढा राख्नुहोस्। सार्वजनिक मा अनुहार मास्क लगाउनुहोस्। भीडबाट बच्नुहोस्, र तंग ठाउँहरूमा जम्मा नगर्नुहोस्। मानवले कोरोनाभाइरसको फैलावट विरुद्ध लड्न यी सामाजिक दूरीका उपायहरू अभ्यास गर्दै आएका छन् र सीडीसीले जनावर मालिकहरूले यो नयाँ दिशानिर्देश पनि पछ्याउने कुरामा पक्का गर्नु आवश्यक छ भनेर जोड दिए। त्यसो हो भने यसको मतलब तपाईंले घरपालुवा जनावरहरूलाई तपाईंको घर बाहिरका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न दिनु हुँदैन। तपाईंको कुकुरलाई पछाडि राख्नुहोस् र अन्य कुकुरहरू र अन्य व्यक्तिहरूबाट छ फिट टाढा राख्नुहोस् जब तपाईं हिंड्दै हुनुहुन्छ; कुकुर पार्क र कुकुर दौडिनबाट बच्नुहोस् जहाँ व्यक्तिहरू र तिनीहरूका घरपालुवा जनावरहरू भेला हुन सक्छन् (यदि तपाईंको शहर पहिले नै तिनीहरूलाई बन्द गरिएको छैन); र नम्रतापूर्वक कसैलाई तपाईंको कुकुरलाई पिल्छीबाट रोक्नुहोस्।
तपाईको कुकुरलाई माथि जान र अर्को कुकुर वा व्यक्तिलाई सुँघ्न दिनु उत्तम हुँदैन। तपाईंलाई थाहा छैन यदि हालसालै कसैले त्यो कुकुरलाई कुक्यो भने। जहाँसम्म प्रमाणहरूले सुझाव दिन्छ कि यो जनावरको कोटबाट कोरोनाभाइरास लिन एकदमै असम्भव छ, स्वास्थ्य विज्ञहरूले अझै पनि सबैलाई उनीहरूको दूरीलाई सतर्कताबाट जोगाउन सल्लाह दिइरहेका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्न प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो। र यदि कसैले हिँडेमा तपाईंको कुकुरलाई जनावरहरू बनाउँदछ भने, तपाई घर पुग्दा कुकुरलाई नुहाउनु राम्रो हुन्छ।
यदि तपाईं सामान्य रूपमा आफ्नो बिरालालाई बाहिर जानदिनुहुन्छ, अब घर भित्र किट्टी राख्नको लागि समय छ, बस सुरक्षित छेउमा बस्न।
तपाईको क्वारेन्टाइनमा हुँदा तपाईको घरपालुवा जनावर बिरामी भयो भने के हुन्छ?
जबकि धेरै पशु चिकित्सा कार्यालयहरूले मात्र तत्काल हेरचाह वा आपतकालीन केसहरू मात्र हेरिरहेका छन्, तपाईंलाई अझै आवश्यक पर्दछ पशु चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाइँको घरपालुवा जनावरले लक्षणहरु देखाउँदछ जस्तै: खाने बानीमा चरम परिवर्तन; अत्यधिक तिर्खा बारम्बार बान्ता गर्ने वा रगत बान्ता गर्ने; असामान्य मल सामान्य भन्दा बढी सुस्त बन्न; अचानक वजन घटाउने; बादल वा रातो आँखा; साथ साथै आपतकालीन परिस्थितिहरू जस्तै सम्भवतः विष निषेचन, सास फेर्न गाह्रो, दौरा, खुला घाउ वा टुक्रिएको हड्डीहरू।
जनावरहरू अझै बिरामी हुँदैछन्, र पशु चिकित्सकहरूले अझै दिनदिनै पशुहरू देखिरहेका छन्। तपाईंको स्थानीय पशु चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस् र के हुँदैछ बताउनुहोस्, र उनीहरूले निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छन् कि घरपालुवा जनावर ल्याउनु पर्छ कि हुँदैन। केही अभ्यासहरूले घरपालुवा जनावरलाई क्लिनिकमा पुग्न आग्रह गर्न सक्दछ, जहाँ कसैले कारमा मालिकसँग कुरा गर्छ, र सम्भाव्य रूपमा घरपालुवा जनावरहरूलाई हेरचाहको लागि क्लिनिकमा ल्याउँदछ जबकि मालिक बाहिर कुर्दै वा घरमा पर्खन्छ।
तपाईंको पाल्तु जनावरहरू कोविड -१ getting को बारेमा अन्तिम शब्द हो?
त्यहाँ कोभिड १ to मा जनावरका केसहरू र मृत्युहरू भएका छन्, तर सीडीसीले जनावरहरूले विषाणुको ब्यबहार गर्न सक्ने र पशु-देखि मानव प्रसारण गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ भन्ने कुनै प्रमाण पाएको छैन। यद्यपि अतिरिक्त सावधानीहरू अपनाउनु पर्नेछ यदि तपाईंले या त सकारात्मक परीक्षण पाउनु भयो वा संक्रमित भएको शंका गर्नुभयो। सामान्य नियम भनेको तपाईंको व्यक्तिको जस्तो व्यवहार तपाईंको पालतु जनावरहरूसँग गर्नु हो, सम्भव भएसम्म दूरी कायम राख्नुपर्दा र प्रसारणबाट बच्न अनुहार छोप्दा। यदि सम्भव छ भने, अर्को व्यक्तिले जनावरहरूको ख्याल राख्नुहोस् जब तपाईं संक्रमित हुनुहुन्छ। जे होस् भाइरस फैलाउने संभावना एकदम कम छ, यसले चोट पुर्‍याउँदैन तयार होउ.
महामारीको समयमा तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको हेरचाहको बारेमा थप जानकारीको लागि, निम्न स्रोतहरू जाँच गर्नुहोस्।
अमेरिकी पशु चिकित्सा चिकित्सा संघ: avma.org
रोग नियन्त्रणको लागि केन्द्रहरू: cdc.gov/coronavirus